Inona ilay Trojan Horse? | Soavaly Noti
Ny miresaka soavaly dia miresaka faritra iray tena midadasika. Azontsika atao ny miresaka momba ny karazany isan-karazany tafiditra ao anatin'io karazana biby io, ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena izay izy no mahery fo, fitafiany, sns. Ka ny soavaly koa dia nanjary olo-malaza avy amin'ny siansa foronina sy ny lafiny hafa. Ohatra iray mazava amin'izany ny be kokoa noho ny fantatra amin'ny anarana hoe Troy Horse.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hahita bebe kokoa momba an'io soavaly hafakely io, ny dikany, ny fiaviany, sns.
1 Inona ilay Trojan Horse?
2 Tantaran'ny Soavaly Trojan
3 Fanehoana kanto an'ny soavaly Trojan
4 Sarimihetsika momba ny Soavaly Trojan
5 Ilay soavaly Trojan hafa
Inona ilay Trojan Horse?
Ny Trojan Horse dia manondro ny artifact lehibe, vita amin'ny hazo, ary izany Io dia nampiasain'ny mpiady grika tamin'ny ady Trojan malaza (nitranga tamin'ny vanim-potoana varahina tamin'ny 1.300 talohan'i JK). Ny asa soratra tranainy indrindra manondro ny Trojan Horse dia Odyssey an'i Homer y Virgil's Aeneid.
Tamin'ny ady voalaza, ny Trojan dia nanaiky ny soavaly Trojan ho fanomezana noho ny fandreseny tamin'ny ady ady. Ny tsy fantatr'izy ireo dia ny ao anaty misy miaramila fahavalo marobe, izay nanafika tampoka tamin'ny alina, namono ireo mpiaro ny tanànan'ny Troy ary noho izany, nahatonga ny fianjeran'ny fanjakany.
Raha ny marina dia mbola tsy fantatra raha marina ny fisian'ny Soavaly Trojan. Betsaka no manamafy fa tsy nanjary azo tsapain-tanana mihitsy izany, saingy, etsy an-danin'izany, misy ny hafa manambara fa mety ho izany karazana milina miaramila vita batemy amin'io anarana io.
Ny marina dia nanjary loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny haisoratra sy ny kanto maro izy.
Tantaran'ny Soavaly Trojan
Nandritra ny andrana tsy tapaka nataony hiditra ny tanànan'i Troy, Nanafatra soavaly hazo goavambe i Odysseus Afaka nametraka mpikambana maromaro tao amin'ny tafika grika izy io.
Notendrena i Epeo hanangana asa toy izany, ary mpiady 39 sy Odysseus mihitsy no natolotra. Ny sisa amin'ny mpiady dia nandao ny soavaly sy ny namany teo alohan'ny vavahadin'ny tanànan'i Troy tamin'ny fikasana mazava ny hinoan'ny Trojans fa fanomezana iray izany dia midika fa nisintona ny mpifanandrina. Ary nandeha tsara ny paikady.
Tamin'io alina io ihany dia nampita am-pireharehana ny soavaly goavambe tao an-tanànany ny Trojans, tsy nahalala izy ireo fa rehefa natory ny olona rehetra, dia hivoaka avy ao anaty trano ireo mpiady grika ary hanomboka hanafika azy ireo.
Fanehoana kanto an'ny soavaly Trojan
Nandritra ny tantara dia maro ireo kolontsaina sy sivilizasiona nanandrana nisolo tena, amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, ny Trojan Horse.
Angamba ny iray amin'ireo sary vongana tranainy indrindra dia ilay hita ao amin'ilay antsoina hoe Vera Mykonos nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK ary fibula vita amin'ny varahina an'ny Vanim-potoana archaic. Amin'ireny no ampiana sombin'ny seramika avy Atena sy Tino. Ary tao amin'ny Gresy Klasika izay nahazoan'ity soavaly tsara tarehy ity ny maha-zava-dehibe kokoa azy sy ny maha-zava-dehibe azy, satria fitaovana maro toa ny solomaso, lovia, firavaka, sary hosodoko no voaravaka amin'ny sariny ... Ho fanampin'izany rehetra izany dia misy ilay sarivongana varahina, asan'ny Stongilion, napetraka ao amin'ny fitoerana masin'i Artemis Brauronia ao amin'ny akopopolis, izay mbola misy sisa tavela.
Ankoatr'izay, ary araka ny efa noresahintsika teo aloha, ity soavaly ity sy ny anjara toerany teo amin'ny tantaran'ny Ady Trojan dia niasa ho toy ny plectrum ho an'ny asa taty aoriana, manasongadina ilay saga nosoniavin'i Juan José Benítez.
Ao anatin'ny boky folo, Benítez, mpanoratra espaniola, milaza ny fomba nanatanterahana ilay iraka antsoina hoe "Trojan Horse", izay nisy ny fandehanana tany amin'ny lasa mba hijerena ireo zava-niseho manokana teo amin'ny fiainan'i Jesosy avy any Nazareta hanazava azy ireo. Marihina fa niteraka resabe ireo boky ireo, satria, tamin'ny lafiny sasany, dia tsy nifanaraka tamin'ny finoana ara-pomban-drazana izy ireo.
Sarimihetsika momba ny Soavaly Trojan
Mazava ho azy, ary toy ny mahazatra mitranga amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny tontolon'ny sinema dia tsy hafahafa tamin'ny tantaran'ny Trojan Horse ary nahavita nitondra azy teo amin'ny efijery lehibe.
Ilay sarimihetsika "Troy", notarihin'i Wolfgang Petersen ary i Storm dia nilalao an'i Orlando Bloom sy Brad Pitt, milaza ny zava-nitranga tamin'ny adin'i Troy, miorina amin'ny zavatra natsangana tao amin'ny tononkalo epikan'i The Iliad. Ary, mazava ho azy, ilay soavaly hazo lehibe noforonin'ny Grika dia mitana toerana malaza.
Ilay soavaly Trojan hafa
Trojan horse koa dia rindrambaiko na programa solosaina izay miasa ho fanomezam-boninahitra ny razambeny. Izany hoe miditra ao anaty solosaina ity virus ity ary manimba ara-bakiteny ny ambiny amin'ireo programa napetraka ary manome fidirana mivantana amin'ny fampahalalana samihafa ary atiny atolotra ao anatin'ny rafitra, saika tsy misy!
Mba hamantarana azy ireo dia afaka mihaino tsara ireo mari-pamantarana samihafa izay mahatonga antsika hahatsikaritra fihetsika tsy mety ao amin'ny solosaintsika, toy ny: hafatra tafiditra anaty varavarankely tsy mahazatra, miadana ao amin'ny rafitra fandidiana, voafafa sy novaina ny rakitra sns..
Raha te hisoroka ny fanafihan'ity virus ity isika dia tsy maintsy matoky izany manana antivirus tsara ary aza mametraka programa amin'ny tranokala tsy fantatra.
Manantena aho fa afaka nanampy anao hahafantatra bebe kokoa momba izany Troy Horse ary rehefa nahita zavatra sasantsasany tamin'izy ireo izay, angamba, mety tsy ho fantatr'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Troy Horse
Ilay soavaly dia